Tirada dadka qaba xanuunka Covid-19 ee Soomaaliya oo maalin qur ah laba-laabantay – War La Helaaba Tallo La Hel
Tirada dadka qaba xanuunka Covid-19 ee Soomaaliya oo maalin qur ah laba-laabantay
Leave a Comment	/ ARIMAHA BULSHADA, MAQAALO
Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in ay korortay tirada dadka uu cudurka Covid-19 ku haleelay gudaha dalka oo ay haatan gaartay 60 qof, ka dib markii 24-kii saacadood ee la soo dhaafay la xaqiijiyay in 35 qof oo hor leh oo ku nool gudaha dalka ay qabaan xanuunka.
Sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay Wasaaradda Caafimaadka ee Soomaaliya, 32 qof oo ka mid ah 35 qof ee haatan laga helay cudurka waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, halka labo ay ku sugan yihiin Hargeysa iyo mid Boorama ah.
Wasaaraddu waxay sheegtay in magaalada Boorama ay tahay markii ugu hooreysay oo laga helo qof qaba cudurkan. Dhanka kale, maamulka Jubbaland ayaa sheegay in cudurkaasi laga helay laba qof oo ku sugan magaalada Kismaayo balse tiradaasi kuma aysan jirin xogta ay shaacisay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya
Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya, Fowsiya Abiikar Nuur, ayaa sheegtay in 52 ka mid ah bukaannada la xanuunsan cudurkan ay xaaladdooda wanaagsan tahay isla markaana ay ku karantiilan yihiin guryahooda.
Guud ahaan Soomaaliya, in la diiwaangeliyay tirada dadka u dhintay cudurkan ayaa hadda ah laba qof, iyadoo qofkii ugu dambeeyay uu ahaa wasiiru dowlihii caddaaladda maamul-goboleedka Hirshabeelle, Khaliif Muumin Tooxow.
Dhanka kale, waxaa la karantiilay dhammaan xubnaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ka dib markii uu xanuunkaasi coronavirus uu u geeriyooday wasiir Khaliif Muumin.
Magaalada Jowhar waxaa isku karantiilay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo golihiisa wasiirrada, kuwaasi oo dhammaantood karantiilka ku jiri doona muddo 14 maalmood ah.
Madaxweyne Waare oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa sheegay in uu doorbiday in uu iskii isu karantiilo.
“Ilaahay unbaan xanuunsanun. Laakiin anigu waan fiicanahay Waxaan doorbiday inaan kaligey iskarantiilo ilaa isbuucii lasoo dhaafay, anigoo is hubinaya sidoo kalena tusaale u noqonaya dadkeyga”, ayuu yiri madaxweyne Waare.
Wali lama soo tabinin xubin kale oo ka tirsan maamulka oo la xanuunsan coronavirus balse wasiirka caafimaadka maamulkaasi Cabdi Macallim Maxamed ayaa BBC-da u sheegay in “xaaladda guud ee Hirshabeelle hadda way yara daggan tahay, waxaa soo gaaray cudurka coronavirus oo laga helay hal qof oo ah wasiir, xildhibaanna ah, Alle ha u naxariisto wuxuu u geeriyooday, xilligaas wixii ka dambeeyayna guud ahaan dadka waxay isku karantiileen meeshii uu qof walba ku sugnaa”.
“Maadaama wasiirku uu xildhibanana ahaa, shaqooyin badanna ay socdeen, oo shirar baarlamaanka iyo golaha wasiirrada ah ay socdeen, dad badanna uu la kulmay, hoteelkana uu dagganaa, ayaa markii isaga laga helay iyo ka horba markii lasoo qaaday waxaa qof walba lagu wacyi galiyay inuu ku sugnaado meesha uu hadda joogo ku sugnaado muddo 14 cisho ah”.
Tirada dadka uu cudurkan Coronavirus ku haleelay gudaha Soomaaliya ayaa maalmihii dambe sare u sii ka caysay, taa oo hadda gaartay 60 qof.
Inta la ogyahay hal qof ayaa ka bogsooday xanuunka, sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya.